Koonfur AFrica |April 30, 2003
SHIRWEYNIHII 2AAD EE ONLF OO LAGU QABTAY GUDAHA OGADENIYA
Bishii September 1998kii waxaa hoggaankii iyo maamulkii jabhadda si qurux badan oo uusan ku jirin buuq iyo is jiijiidasho uga dagay guddoomiyihii hore ee jabhadda N/Hure Sh.Ibraahim Cabdalla Muxamed oo halganka jabhadda xilligii ugu adkaa kasoo bixiyey wuxuuna ku wareejiyey Ad.Muxamed Cumar Cismaan oo ah shakhsi si weyn looga yaqaanno soomaalida qaybaheeda iyo caalamka kalaba taasoo wax weyn ku kordhisay halganka jabhadda waxayna jabhadda ONLF muujisay ilbaxnimo dheeraad ah oo aan tobankii sano ee inoo danbeysay laga aqoonin geeska afrika gaar ahaan soomaaliya oo kursi jacayl dartii qaarna ay dhalashadii iyo wadajirkii walaalnimo ka santaageen qaarna dhiig muslim, dhac bani aadam iyo dhibaateyn dad aan waxba galabsanin uu ku xambaaray. Waxaa la dhihi karaa arrinta ay ONLF kusoo bandhigtay shirweynaheedii labaad in ay tusaale u noqon karto guud ahaan soomaalida. Dhanka kale waxay ahayd arrin tababar u noqotay dhammaan xubnaha halganka ku jira, waxayna doorashadaas horseed u tahay dhaqan siyaasadeed oo salka ku haya ilbaxnimo, dagganaan iyo in aan ninna bulshada laga xigin, waxayna arrintaasi muujisay dareen ah in qof waliba oo ogaadeeniya u dhashay uu wax walba ka hormariyo maslaxada guud. Dad badan oo neceb halganka shacabka ogadeeniya iyo isticmaarka laf ahaantiisaba waxay natiijadii shirka ku noqotay dhabar jab waayo waxaa la filayey inuu burburi doono laguna kala tagi doono.
Markii lagu dhawaaqay natiijadii doorashada Sh.Ibraahim Cabdalla intii uu istaagay ayuu gacan qaaday Ad.Muxamed Cumar Cismaan oo ah ninka ku guuleystay codbixintii dhacday. Markii ay doorashadii dhammaatay ayaa labada halgame intay si wanaagsan isu gacan qaadeen ayey is garab istaageen waxayna labadooduba halkaas ka jeediyeen khudbado aan carrabka baarkiisa ahayn ee kasoo baxay niyad saafi ah oo ay khayaano ka madhantahay. Arrintaasi waxay warankii ku taagnaa ka siibtay shacabka soomaaliyeed ee reer ogaadeeniya oo wax noqoshadiisa usoo galay halgan walina ugu jira waayo waxay indheer garadka oo dhami ka cabsi qabeen in jabhaddu yeelato dhaqanka lagu bartay walaalhooda soomaaliyeed oo ah anigu aan madax noqdo haddii kale ha la burburo.
Intaas kaddib; wuxuu shirku guda galay howlihiisii caadiga ahaa, Waxaa lagu ansixiyey xeerka jabhadda qodabadiisa kala duwan iyo barnaamijka siyaasiga ah ee jabhadda, waxaa kaloo shirkan looga dooday halganka ay jabhaddu ku jirto sidii loosii horumarin lahaa arrimo badan gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, sare u qaadidda tayada ciidanka xoreynta, abaabulka dadweynaha iyo unugyada jabhadda ee gudaha dalka. Dhanka kale waxaa shirka lagaga dooday xaaladda geeska afrika guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo ay faragalin ku hayso itoobiya oo adeegsaneysa daneystayaal isku tilmaamay siyaasiyiin. Dhammaan arrimahaas aan sheegnay waxaa laysula meel dhigay si loo dhanyahay, wuxuuna shirku ku dhammaaday guul.
Waxaa xusid mudan in ciidanka itoobiya oo uu ka muuqday daal aad u badan uu isku dayey in weerar kama danbeys ah kusoo qaado goobta shirku ka socday waxaase si rasmi ah ugu jilib dhigay ciidanka xoreynta ogaadeeniya oo u diiday in ay u suurto gasho waxa ay doonayeen, arrintaasina waxay kor u qaadday dareenka dadkayaga xaq u dirirka ah.
Muddadii dheereyd ee uu soo taxnaa halganka shacabka ogaadeeniya iyo heerarkiisii kala duwanaa waxay siddeeddii sano ee ugu danbeysay ahayd taariikhdii ugu dheereyd ee uu si toos ah dagaalku uga socdo gudaha dalka. Waa sharaf taariikheed oo ay muteysteen jabhadda iyo dhammaan xoogaggii kala duwanaa ee ka qayb qaatay halgankaas. Iyadoo ay arrintu tahay ninba taagtiis ayey qodaxi ugu tagtaa oo aan annaguba dagaalkaas ku weynay dad farabadan marka laysku daro qaybihii kala duwanaa ee arrinta ay ka mideysanyihiin ahayd oo kaliya halka cadow ee ay leeyihiin, haddana markaan dib u milicsanno khasaaraha culus ee EPRDF ka gaadhay dagaalkii ogaadeenya muddadaas aan kor kusoo tilmaannay waa mid cashar ugu filin madaxda itoobiya haddii ay wax ku qaadanayaan.
Akhri Qaybta 8aad